कसरी गर्ने माछापालन ? कृषकले जान्नै पर्ने कुरा - ज्ञानविज्ञान
स्वदेशी जातका माछाहरू
नेपालमा करिब द्दज्ञठ जातका माछाहरू पाइन्छन् जसमध्ये रहु, नैनी, भाकुरलाई व्यावसासिक रूपमा पालिन्छन् सहर, कत्ला, मागुर र हिले माछाहरूलाई पनि कृत्रिम जलाशयमा पनि पालन गर्न सकिन्छ । स्वदेशी जातका माछाहरूमा निम्न विशेषता पाइन्छ ।
पुरानो गहिरो पोखरीमा हल्लक बढनाले यस्ता पोखरीमा पालन गर्न उपयुक्त हुन्छन्, ढिला बढ्छन् तर प्राक्रितिक आहारा खाएर पनि राम्रै हुर्कन सक्दछन् । रागव्याधि सहने क्षमाता निक्कै राम्रो हुन्छ । निक्कै स्वादिलो तथा लोकप्रिय छन् ।
स्वदेशी जातका मुख्य माछाहरू
यो माछा निक्कै स्वादिलो तथा लोकप्रिय जातको माछा हो । यसको शरीर लामो र डोलो खालको हुन्छ । शरीरभरि मध्यम आकारका कत्ला पाइन्छन् र कत्लाको रङ केही रातो हन्छ । यस माछाले एक कोसीय लेउ, प्राणीजन्य जीवाणु र सडेगलेको झारपात खान्छ । ढिलो बढ्छ र २–३ वर्ष पालेमा एक डेढ किलोको हुन्छ । यो माछा पुरानो गहिरा पोखरी तथा प्राकृतिक दहहरूमा चाँडो बढ्छ ।
यस जातको माछाको शरीर लामो माथिल्लो भाग खैरो तथा तल्लो भाग सेतो हुन्छ । शरीर भरी कत्ला पाइन्छ र आँखाको रङ सुनौलो देखिन्छ ।
यस जातको माछाको शरीर केही चौडा र माथिल्लो भाग खैरो तथा पेट सेतो रङ हुन्छ । यसको शरीर भरी ठुलठूला कत्ला पाइन्छन् ।
विदेशी जातका माछाहरू
नेपालमा पालिने कमन कार्पहरूमा जर्मन कार्प, इजरायली कार्प र नेसिस कार्प मुख्य छन् । जीउ भरी कत्ला हुनेलाई जर्मन कार्प र कम कत्लाहुनेलाई इजरायली वा मिरर कार्प हुन्छ । यसको शरीर केही चेप्टिएको लाम्चो हुन्छ । ओठको दुवैतर्फ जुङ्गा हुन्छ । शरीरमा दुई जोडी पखेटाहरू कान र पेट नेर, र एक्लो पखेटा तीनवटा ढाड, मलव्दार र पुच्छर मा पाइन्छ । यो माछा सर्वभक्षी भएकोले सूक्ष्म जीवाणु, कीरा, कुहिएको झारपात तथा कृत्रिम आहारा खाएर हुर्कन्छ ।
यसको पुरै शरीरमा ससानो चाँदी जस्तो टल्कने सेतो कत्ला हुन्छ । शरीर केही लाम्चो, चेप्टो र तल्लोभाग केही धारिलो हुन्छ । टाउको केही सानो र गोलो हुन्छ । यस माछाको गिलमा मसिनो जाली हुन्छ र पोखरीमा भएको वनस्पतिजन्य जीवाणु खाएर हुर्कन्छ । यो माछा २५–३० सेन्टिग्रेड तापक्रममा राम्रो फस्टाउँछ । पोखरीमा यो माछा एक वर्षमा एक डेढ किलो सम्मको हुन्छ । यो माछा बढीमा ५० सेन्टिमिटर लामो र ५० किलोसम्म वजन भएको पाइएको छ ।
यसको टाउको ठुलो र लाम्चो भएकोले यसको नाम बिगहेड राखिएको हो । शरीरमा सिल्भर कार्प जस्तै ससाना कत्लाले ढाकेको हुन्छ ।
यसको जीउ लाम्चो र केही डोलो खालको तथा टाउको चौडा हुन्छ । शरीरमा ठुलठुला एकनासका कत्लाहरू हुन्छन् । हुर्किएको माछाले पोखरीको झारपात र घाँस खान्छ ।
कत्ला नभएको लामो लामो जुङा र विष डङ्क भएका स्थानीय जातका माँगुर रैथान जातका माछा हुन् । गिनीहरू हिले पानीमा तथा पानीमा थोरै अक्सिजन भएको अवस्थामा पनि बाँच्न सक्दछन् । यो माछा माँसाहारी हुन्छ र बढीम आधा किलोसम्म हुन्छ । हाल नेपालमा अफ्रिकन जातका हाइब्रिड माँगुर हाल निकै लोक प्रिय भैरहेका छन् ।
रेन्वो ट्राउ चिसो र सफा पानीमा हुर्कने ज्यादै स्वादिलो विकासे माछा हो । प्राकृतिक अवस्थामा यो माछा मांसाहारी हुन्छ तर कृत्रिम रूपमा पालन गर्दा उच्च स्तरको प्रोटिनयुक्त दाना खुवाएर यो माछालाई सफलतापूर्वक पाल्न सकिन्छ ।
यो माछा २०४५ सालमा जापानबाट आयात गरी त्रिशुली तथा गोदावरीमा पालन गरिएको छ । यो माछा १– २१ सेन्टिग्रेड तापक्रमा जीवित रहन्छ । माछाको वृद्धि तथा प्रजननको लागि पानीको तापक्रम १५ देखि १८ सेन्टिग्रेड र पानीमा अक्सिजनको मात्रा ७ मिलि लिटर भन्दा बढी हुनु पर्दछ । यो माछालाई सफा तथा केही बग्ने पानी चाहिन्छ । माछालाई उमेर अनुसार आहारा खुवाउनु पर्दछ ।
माछापालन व्यवसायका लगि निम्न प्रविधिमा ध्यान दिनु पर्दछ
माछापालनको लागि पोखरीको ब्यवस्थापनः पोखरीमा भएको झार, जङ्गली माछाहरू हटाउनु पर्दछ । पुष-माघ महिनामा पोखरी सुकाएर पोखरी सफा गर्नु पर्दछ । पोखरीमा प्रति कठ्ठा १५ किलोको दरले चुन छर्नु पर्र्दछ । पोखरीमा करिब १.५ मिटर स्वच्छ पानी भर्नु पर्दछ । पोखरीमा प्राकृतिक आहाराको वृद्धिका लागि प्रत्येक दुइ हप्तामा करिब १० किलो गोबर वा कुखुराको सुली चारैतिर फैलने गरी छर्नु पर्दछ ।
माछापालन गर्दा पोखरीमा भएको प्राकृतिक आहाराले मात्र पुग्दैन । माछाको वृद्धिका लागि थप थप आहारा दिनु पर्दछ । माछाको दाना बनाउँदा धानको ढुटो १४ प्रतिशत, गहुँको चोकर ३४ प्रतिशत र मकैको पिठो ५ प्रतिशत, सिद्रा ७ प्रतिशत, भटमास २३ प्रतिशत, पिना १५ प्रतिशत, भिटामिन तथा मिनरल मिक्सर २ प्रतिशत लाई राम्ररी मिसाइ पानी हालेर केही मोक्राएर डल्लो बनाइ पोखरीको एक छेउमा राखि दिनु पर्दछ ।
धान खेतमा माछा पालन
तराइका पानी जमिरहने धान खेतमा माछा पालेर धानको उत्पादन तथा माछा एकै साथ लिन सकिन्छ । धानको बेर्ना रोपेपछि खेतमा कार्प जातका माछाका भुराहरू छाडिन्छ ।
पोखरीमा माछाको वृद्धि, खानाको अवस्था आदिको निरीक्षण तथा रोग व्याधी, परजीवि (सर्प, भ्यागुता आदि) आदिको नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । उत्रत तरिकाले माछापालन गर्दा एक वर्षमा प्रति कठ्ठा ४–५ टन आलो माछा पाउन सकिन्छ ।
पंगास माछा शरिरमा कम काँडा भएको र व्यावसायिक रुपमा धेरै उत्पादन दिने माछा हो । यसले हावाबाट पनि अक्सिजन लिन सक्ने हुनाले पोखरीमा धेरै संख्यामा स्टक गर्न सकिन्छ । यो माछा र्सवहारी स्वभावको हुन्छ । व्यवसायिक पालनमा यस माछाको मुख्य आहारा नै पेलेट दाना हो ।
नेपालमा यो माछाको उत्पादन ३० देखि ७० टन प्रति हेक्टर प्रति वर्षसम्म उत्पादन भएको छ । यो जातको माछाको स्टकिङ्ग ३ देखी १५ गोटा प्रति वर्ग मिटरका दरले पोखरीको व्यवस्थापन अनुसार पालनको लागि २ देखी ३ इन्च साइजको भुरा राख्न सकिन्छ । यो माछाले धानको ढुटो, पिना, चोकर, पिठो आदि पनि खान्छ । सामान्यतया ७ देखि ९ महिनाको अवधिमा विक्री योग्य साइज हुन्छ ।
Don't Miss it किन मृत्युदर बढि हुन्छ साना चल्लामा ? कृषकले जान्नै पर्ने कुरा
Up Next कसरी गर्ने त व्यवसायीक बाख्रा पालन ? आवश्यक सम्पूर्ण जानकारीसहित
कसरी हटाउने नवजात शिशुको रौँ ?
१. नवशिशुलाई २४ घन्टासम्म नुहाउनु हुँदैन । २. ठूला बच्चाभन्दा नवशिशुहरु चाँडै बिरामी हुने र चाँडै सिकिस्त हुने हुनाले विशेष…
वाफ लिनुका फाइदा, यस्ता छन्
१. यसले डण्डीफोर तथा चाउरीलाई कम गर्छ र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावना पनि घटाउँछ । २. यसबाट छालाको मोइस्चर ब्यालेन्स…
यति मात्रै गर्न सके निचोरेर फालेका कागतीकाे खोस्टाका यस्ता अनौठा फाईदा हुन्छन्, जान्नुहोस्
धेरै चिसो पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिदैन, यस कारण
१. पाइल्स चिसो पानीले मललाई जमाउने काम गर्छ । यसकारण पाचनप्रणालीमा यसले समस्या पैदा गर्ने काम गर्छ । मललाई राम्रोसँग…
गाऊ घर तिर सजिलै पाइने चिज घिउ कति उपयोगी ???
घिउ दहीलाई मथेर निकालिएको नौनीलाई पगालेर वा खारेर बनाइन्छ । औषधी उपचार १. कपाल दुखेमा गाईको घ्यू पाँच चम्चा कराईमा…
यस्ता छन्, पिनास हुदा खान हुने र खान नहुने खानेकुराहरु
पिनास हुँदा खानु पर्ने कुराहरु पिनास भएका ब्यक्तिले पानी जाहिले पनि तातो वा मनतातो पिउनुपर्छ र प्राय चिल्लो रहित उसिनेको…